Iyo Yekushambadzira Genius yaJim Irsay | Martech Zone
NeSvondo, Indianapolis Colts yakakunda iyo Tennessee Titans kuti ive AFC South Champions. Mutambo usati watanga, zvakadaro, muridzi weColt Jim Irsay akamhanyisa mushandirapamwe wakajeka pamusoro pe Twitter.
Muchiitiko chekuti wanga usiri kumusoro pane izvo ruzivo, ngationgororei maTweets aIrsay kubva Zvita 31st:
KUTI UWANE MUPENYU UYE $ 4K - Na1: 15pm Svondo ino kuchave nemutema Prius akamiswa padenga repanze kuchamhembe kwekunze kweLucas Oil Stadium…
KUTI UWANE MUPENYU UYE $ 4K - Vanopinda vanofanirwa kunge vaine makore gumi nemasere kana kupfuura uye vachitevera @jimirsay pa Twitter.com…
KUTI UWANE MUPENYU UYE $ 4K-KAPI kupinda pamunhu, zvakapetwa zvakawanda zvinokanganisa iwe (kwete kutamba)!
KUKUNDA MUTSVENE UYE $ 4K - Na1pm ino Svondo ini ndichatumira mubvunzo. Iwe unogona kupinda nekutumira yako mhinduro.
KUKUNDA CHITENDERO UYE $ 4K - Ur tweet INOFANIRA iine zita rako sekuonekwa kwaro pane rezinesi rekutyaira UYE unosanganisira @jimirsay NE #gocolts.
Ngatitorei zvakanakira zviri pachena zverudzi urwu rwekusimudzira. Chero nguva yaunopa mubairo wakakosha, iwe unogadzira mizhinji yakawanda uye kufarira muchiratidzo. Unosimbisa kuvimbika. Iwe unoita kuti vanhu vazhinji vafare, uye zvingangoita munhu mumwe anofara zvakanyanya. Makwikwi anowanzo kuve makuru.
Asi timu yekutengesa yeColts yakaita chimwe chinhu chakanyatsojeka nemushandirapamwe uyu, chimwe chinhu chingadhura uye chinodya nguva kuita neimwe nzira Ivo vakaunganidza rondedzero chaiyo yeColts Fans uye Twitter inobata.
Funga nezvazvo! Kushambadzira kukuru kunoda yakachena, yakarurama, muchinjikwa-yakatariswa dhatabhesi. Kuvandudzwa kwetekinoroji nyowani senge Twitter zvinoreva kuti kune nzira nyowani dzekuwana vanhu, asi panguva imwechete, zvinobatsira zvikuru kugona kubatanidza mafeni kumaakaundi eTwitter.
Tarisa, semuenzaniso, paTwitter mushandisi @ DeadStroke96. Iwe unogona kutaura kuti iye muhombe fan yeNFL nekungoverenga maTweets ake. Asi hapana nzira yekuziva kuti iye ndiani, nekuti uyu mushandisi haana kupa zita pane rake nhoroondo ye Twitter. Muchokwadi, vanhu vazhinji vanongoshandisa ma alias, zita rekutanga kana zita remadunhurirwa online. Iko hakuna nzira iri nyore yekuyambuka-mareferenzi neese epamutemo data iwe aungave iwe pane mumwe munhu, senge nhoroondo yekutenga, kushambadzira dhatabhesi, nezvimwe.
Asi ikozvino, Jim Irsay (uye nemunhu wese) anoziva kuti @ DeadStroke96 ndizvo George Ketchman. Zvinotaridzika kunge mazana - kana asiri zviuru - zvevanhu vakazvipira kupa yakachena, yakajeka data yemakwikwi aya. Tungamira ku Twitter Tsvaga kuti uzvionere wega. (Unogona kutsvaga "#gocolts @jimirsay nhabvu" kutetepa mhedzisiro.)
Imwe yedzakanakisa nzira dzeku wedzera kugadzirwa kuendesa basa kune vamwe vanhu. VaColts vangadai vakapedza maawa asingaverengeki vachitevera vese vateveri vaJim Irsay, vachitarisa maprofiles avo nema tweets avo kuyedza kuona mazita avo azere zviri pamutemo. Kana, ivo vanogona kumhanya iwo iwo makwikwi ivo vaizoita zvakadaro, uye kurega vanhu vaite iro basa ivo pachavo.
Basa rakanaka, Jim Irsay uye neColts timu yekutengesa!
Tags: vanajim irsayMarketing
Ina Kutaurirana Kwakanaka Maitiro eTekiniki Kutanga
Jan 3, 2011 na3:20 PM
Asi…. yaikosha $30,000 here? Uye vachaita chero chinhu nedata?
Jan 3, 2011 na5:24 PM
Ipfungwa huru…asi chii ROI? Pandakatanga kuverenga tweet nezve kusimudzirwa musi weMugovera @jimirsay aive nevateveri vanosvika zviuru gumi nezvisere. Ndichangobva kutarisa uye ikozvino 18,000+. Mutengo wacho waikwana zviuru zviviri zvevateveri vatsva here?
Jan 3, 2011 na6:11 PM
Ndinokahadzika mutengo wacho waitova pedyo ne$30k. Tinoziva kuti yaive mari inokwana madhora mana. Zvinogoneka kuti vakawana mota pasina mutengo wakananga chero mukutsinhana kweimwe kutengeserana kwekutengesa.
Kana maColts akashandisa iyo data, saka hongu, yakakosha $4,000. Zvinotora boka rakakura mavhiki akawanda kuyambuka vateveri vese veIrsay nevanhu chaivo, uye izvo zvaisazovhara vazhinji vashandisi ve Twitter avo vausingakwanise kuziva.
Ehezve, pane imwezve chidimbu cheruzivo: Chero ani anogona kuwana iyi runyorwa izvozvi, kwete chete maColts. Izvi zvinofanirwa kukuudza chimwe chinhu pamusoro pemushandirapamwe uyu.
Jan 3, 2011 na10:37 PM
Iwe zvakare unofanirwa kuisa mumutengo weiyo 'yakakura timu' ipapo. Iti unokwanisa kuyambuka-reference munhu 1 maminetsi ega ega matatu, kana makumi maviri paawa. Kune zviuru makumi maviri zvevateveri, uri kutarisa zviuru zana zvemaawa ekushanda. Kanda iyo pane inonzwisisika $3/awa yekupinda data chinzvimbo, uye iwe uri mune imwe $20 yemutengo. Ikozvino wadzokera kumadhora gumi nemana kana mota iri yemahara, $20,000+ kana iri pamutero.
(Ah, uye zviri nani kuti vatange pairi nhasi usati watsvaga.twitter.com inozvipukuta zvese mukati mevhiki imwe hahahaha! 🙂 )
Ini ndinofunga Irsay AKAKURU pakuvaka ruzha, kuita kuti vanhu vataure, nezvimwe. Uye ndinofunga tose tingamuda kuti ashandise data sezvaanogona uye sezvaanofanira kuita, asi ini handifungi kuti zviri kuitika.
Chinangwa chake chikuru ndechei? Ita kuti vanhu vataure uye vafare pamusoro peColts (uye iye), uye ramba uchiratidza kuti ane mari yakawanda uye anogona kupa zvinhu kure. Akabudirira here? Hongu.
Jan 3, 2011 na10:22 PM
ROI haisi muvateveri veTwitter Steve. Hapana nzira yaunogona kuyera ROI yechinhu chinodonha pasi seizvi. Hazvisi zvekuti vangani vateveri Irsay vakawana nezvechiso chesangano riri kushambadzirwa muguta rese. Heck inenge yakakosha kune yese pub yavari kuwana kubva mukushambadzira geeks sesu. Mitambo yacho inotengeswa kunze zvakanaka kumberi saka kunze kwekutengesa kwekutengesa maColts haana nzvimbo yekuvandudza ROI yavo pakutaura.
MaColts anogona kuwana mari kuburikidza nematikiti… asi yakati wandei inowanikwa kuburikidza nerutsigiro. Vatsigiri vanobhadhara nhamba huru. Kusiyana nekambani yakajairika, vateveri vezvikwata zvemitambo vanonamatira. Saka mubvunzo uri nani ungave - chii kukosha kwehupenyu hweColts fan…. uye Jim Irsay akaita chero vateveri veColts nekuita izvi? Ndinofunga angadaro. Vanhu vaneta nezvikwata zvinogara zvichitora… ichi chiito chakanaka chekudzorera zvishoma.
Jan 11, 2011 na2:45 PM
Izvo hazvisi zve ROI, vateveri, kana mutengo. Zviri nezve egomaniacal ramblings yebhirioni ane mari yakawanda kupfuura pfungwa. Ndinoreva chaizvo… akabhadhara $1M yegitare raJerry Garcia. Unonyatsofunga kuti ane hanya ne $30k?
Kunyange ini ndichibvuma kuti mari nepfungwa hazvina chinhu chakafanana, handina chokwadi chekuti ndinobvuma kuti Irsay ndeye egomaniacal. Muzviitiko zvakawanda, Irsay yaita zvese zvinogoneka kudzivirira kutariswa. Ndinoshanda nevamwe vanonyanya kuonana naye uye vakandiudza kuti murume anoshamisa ane moyo munyoro. Kana iwe ukatsvaga, uchaona kuti anochengeta vazhinji vanopa rubatsiro vachienda kuno kuIndiana.
ndiani chaizvo akahwina mota?
Jan 3, 2011 na3:32 PM
Ini naBrad pane iyi, zvakadaro. Robby anoita fungidziro huru yekuti maColts achakwirisa ruzivo. Ini ndinokahadzika pane izvo kumberi ndichiona ivo vaine imwe yakaipisisa (nekuti inenge isipo) kuvapo munzvimbo yemagariro yeboka repro. Zvino zvakapihwa vateveri vavo kuti vavaitire zvakawanda pamhepo uye ndizvozvo asi ikozvino Irsay ari kutumira nzizi yake yekuziva uye nekupa matikiti nemota hazvireve kuti sangano raita huchenjeri. Maparamita emakwikwi anonongedzera kune mumwe munhu ane ruzivo rwe Twitter anopinda munzeve yaJim. Zvichida Doug neshamwari yake Pat Coyle vanogona kutaura neColts sesangano zviri nani kupfuura ini. Imwe kukosha mune izvi ndeyevanogona vatsigiri venguva yemberi. Toyota yakawana imwe pub huru kubva pane izvi, kunyangwe vangadai vakawana rumwe rubatsiro kubva kuna Jim uye vatengesi vepanzvimbo yavo vangangove vasina kuisimudzira uye kuisimudzira sezvavaigona. Kambani yesocial savvy inotsvaga kudyidzana nemaColts inenge ichinanzva mazambiringa avo pachibvumirano chakadai. Mutengo wemaColts ungangodaro usiri wemota kana wakadzikiswa zvakanyanya nekuda kwekudyidzana kweToyotas nechikwata (mota ingangoita timu iri pasi pe $20k kana vakaibhadhara) MaColts seboka angadai akawana mukana wakawanda dai mubairo waive wakawanda. yakarongedzwa zvakavakomberedza & chigadzirwa chavo asi kushambadza hakukuvadze. Chinhu chikuru kuona maTweets eIrsay asiri kusefa asi kubva pakuona kwekushambadzira ini ndichiri kuona mukana wakawanda uye nzvimbo yekuvandudza.
Jan 3, 2011 na6:07 PM
Kana kuti pamwe Robby ane rurimi rwake zvakasimba padama rake.
Kana zvakadaro, makatamba zvakanaka changamire.
Jan 3, 2011 na10:24 PM
Jan 11, 2011 na2:43 PM
Ndiye bhirioni. Anoshandisa $30k kubva pamubhedha. Zvakaoma, hazvisi pamusoro pemari. Zviri pamusoro ego.
Pretty brilliant ndingati.
Sekureva kwaJim Irsay's mota/cash giveaway mitemo, iyo tweet inoda kusanganisira zita rako sezvarinoratidzika parezinesi rako rekutyaira. Kunyangwe izvi zvingave zvekuchera data, ndinofunga kwaive kudzivirira kubiridzira. Akanga ane muganhu we-tweet-per-person; iwe wakarambidzwa kune akawanda maTweets. Mutemo we "zita rakazara" waikurudzira kufungidzira kwakawanda kubva kune mumwe munhu ane akawanda Twitter account.
Jan 11, 2011 na2:41 PM
Ini handina chikonzero chekutenda kuti kune chero huwandu hwehungwaru kuseri kwekusimudzira. Tsaona inofadza, asi kwete nyanzvi.
Jan 15, 2011 na6:54 PM
Zvinogara zvichizvininipisa kana mumwe munhu ane mukurumbira (@jimirsay) ajoinha Twitter uye anopfuura nhamba yevateveri zvakakutorera makore kuti uunganidze… mumavhiki mashoma!